“အကြင်နာသို့” | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Poetry » “အကြင်နာသို့”	12
- ခေတ် လုလင်
Posted by ခေတ် လုလင် on Jul 6, 2012 in Poetry | 12 comments
အ ကြင် နာ သို့
ကျွန်တော် ဝေဒနာကို သနား၍ဖြစ်မည်။
ကျွန်တော် နှလုံးသွေးများ လျင်မြန်စွာလည်ပတ်၍
သူသုံးပြီးသား Tissue များထွက်လာသည်။
ကျွန်တော် အကြင်နာကို ချစ်နေသေးသည်။
About ခေတ် လုလင်
ခေတ် လုလင် has written3post in this blog.
View all posts by ခေတ် လုလင် →	Blog
mamanoyar says: ထို့ကြောင့် …………………
ကဗျာလေးကို ဖတ်ကြည့်ပြီး အကြင်နာကို သနားလို့
ခေတ် လုလင် says: ကျေးဇူးပါ မမ
ဇောက် ထိုး says: မြားနတ်မောင် လျှောက်လည်နေလို့ ဒီလိုဖြစ်ရတာ.. မျြားနတ်မောင်ကို ဆန္ဒပြမယ်..
သူသုံးပြီးသားတွေတော့ မသုံးပါနဲ့တော့ဗျာ… သူ့ကိုယ်သင်းနံ့က ဘာနံ့ဖြစ်မလဲ…မှန်း……
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး says: ချစ်လျက်နဲ့လည်း…
maung khinmin says: အချစ်ကြောင့်ပါလားနော်…ထို့ ကြောင့်တွေဖြစ်ဖြစ်သွားတာ
aye.kk says: အကြင်နာ…
မောင်ပေ says: ကိုခေတ်လုလင်ရေ
သြဂုတ်လ ရဲ့ လဝက်ကျော်နောက်ပိုင်းမွေးတဲ့လူတွေဟာ ကန်ရာသီvirgo ၊ အချစ်နဲ့ ပတ်သက်ရင် တော်တော်ကံကောင်းတဲ့လူ တွေလဲ ပါတယ်နော
၀မ်းတွင်းရူး says: အချစ်ကြောင့် ကိုယ်သင့်နံ့ လေး လွမ်းသပေါ့။
snow white says: ခံစားသွားပါတယ် ဖတ်လို့လည်းကောင်းပါတယ် တကယ့်ကိုခံစားလို့ရပါတယ် မြားနတ်မောင်လည်း အလည်လွန်နေတာနေလိမ့်မယ် လုလင်လှည့်မရောက်သေးလို့နေပါလိမ့်မယ် …..
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 113
si tone says: wowwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ! ကဗျာက တကယ်ကို ခံစားချက်ပါတယ်နဲ့ တူတယ်….
တကယ်ကို ဖတ်လိုကောင်းပါတယ်….. တကယ်ကိုကောင်းပါတယ်
metallic says: အကြင်နာ ရီဝေတဲ့အပြုံးလေးများကြားမှာ
maung khinmin says: ထို့ ကြောင့် ……
Comments By Postကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - Silver Twig - လုံမလေးမွန်မွန်မြေမျိုပျောက်ကွယ်ခြင်း - kai - uncle gyi``ဒေဝေါကြီး လာမှာစိုးတယ်´´ - kai - Mr. MarGaရပ်ကွက်မှသည် နိုင်ငံဆီသို. - kai - garudaအိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - မဟာရာဇာ အံစာတုံးမောင်ပေ ရဲ့ ပုံတိုပတ်စများ - Mobile13 - TNAသူတို့ ရောက်လာကြတော့မည်၊ သတိသာ ထား - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - မဟာရာဇာ အံစာတုံးbin bo..........(ဘင်ဘို) - uncle gyi - မိုး မင်းသားအဟံ ပထမံ - uncle gyi - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးသို့ ချစ်သောဖေဖေ - uncle gyi - အရီးခင်လတ်အမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - uncle gyi - မောင် ပေကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - TNA - TNAအထူးတလည် ကျေးဇူး တင်ရှိခြင်း - လုံမလေးမွန်မွန် - Mr. MarGaPassport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - uncle gyi - အရီးခင်လတ်နားစွန် နားဖျား ရပ်ကွက်...။ - လုံမလေးမွန်မွန် - အလင်း ဆက်ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိခဲ့သော ကျတ်တို့ဌာနီ - လုံမလေးမွန်မွန် - Mobile13သူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် - အလင်း ဆက်ရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - GaviaGirl - Ma Eiအမုန်းတွေဝေး အပြုံးတွေပေးမယ့် ဒီည................................ - padauk moe - မောင် ပေတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ - KZ - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေက ရတဲ့ အတွေး - Mr. MarGa - Mr. MarGaမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - Mr. MarGaရထား ထွက်တော့ မယ် - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - မဟာရာဇာ အံစာတုံးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့ - အရီးခင်လတ် - မွေ့ကေသာအိပ်မက်မင်းသမီး - Phoe Thitsar - KZဘုံဆိုင်အတွင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - ကြောင်ဝတုတ်East West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities